Ilay sakaizany ihany no nahavanon-doza…: Novonoiny dia nariany tany an- tsaha ny fatin’ilay tovovavy | NewsMada
Niaiky ny heloka bevava vitany ity tovolahy iray antsoina hoe R.Richard. Maty notsatohiny ny antsy teo amin’ny fony ny tovovavy iray, izay tsy hafa fa hoe sakaizany ihany. Nariany tany an-tsaha avy eo. Voasambotry ny zandary, ny alakamisy teo ity nahavanon-doza ary efa naiditra am-ponja.
Tra-tehaky ny zandary ka naiditra am-ponja vonjimaika ao amin’ny fonjan’Antsirabe, ny alakamisy teo ny lehilahy iray voalaza fa namono nahafaty ny sakaizany. Tranga izay ni­seho ny 22 jolay teo tao amin’ ny fokontany Tsaratanàna, kaomina Alakamisy distrikan’ Antsirabe II. Araka ny fantatra, maty nisy namono teny An­janavatra, fokontany Tsara­tanàna ny tovovavy iray vao 21 taona monja. « Voatsin­drona zava-maranitra ny fony ka niteraka ny fahafatesany, raha ny fizahana na­taon’ny dokotera », hoy ny fanazavan’ny vondron-to­bim-paritry ny zandarimaria ao Antsirabe.
Resaka findramam-bola niafara amin’ny tsindron’antsy
Nambarany fa nanao tatitra ny «chef de poste avancé» ny zandarimaria Antana­man­jaka fa nahitana fatin’olona tany an-tsaha tsy lavitra teo. Vokany, nisokatra nanaraka izany koa ny fanadihadiana sy ny angom-baovao. Fan­tatra tamin’izany fa lehilahy iray sakaizan’ny maty ihany no nahavita namono azy. Nilaza i R.Richard tamin’ny fanadihadiana azy fa nindrana vola taminy io vehivavy io taloha. Tsy tafaveriny anefa ilay vola ka dia nanomboka tamin’izay ny fiarahan’izy roa ireo. « Nifanaiky izy ireo fa tsy hisaraka mihitsy fa faty no hisarahana », hoy ha­trany ny zandary. Antony nanaperan’ilay lehilahy ny ain’ny sakaizany tamin’ny tsindron’antsy manandrify ny fony. Niaiky ny heloka bevava vitany izy ary niakatra fampanoavana, taorian’ izay.